Maninona ny fifandraisana am-pientanam-po no ho zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny vanin-taona fivarotana | Martech Zone
Maninona ny fifandraisana am-pientanam-po no ho zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny vanim-potoana fivarotana
Alarobia, Oktobra 20, 2021 Alarobia, Oktobra 20, 2021 Thea C. Myhrvold
Nandritra ny herintaona mahery, ny mpivarotra dia niatrika ny fiatraikan'ny areti-mandringana amin'ny varotra ary toa niatrika vanim-potoana fivarotana fialantsasatra sarotra ihany koa ny tsena amin'ny 2021. Ny fikorontanana amin'ny famokarana sy ny famatsiana dia mitohy manimba ny fahafaha-mitazona ny lisitra. azo antoka amin'ny tahiry. Ny protokolà fiarovana dia manakana ny mpanjifa tsy hitsidika ny fivarotana. Ary ny tsy fahampian'ny asa dia mamela ny fivarotana hikorontana raha ny momba ny fanompoana ireo mpanjifa miampita ny transom. Tsy misy izany vaovao mahafaly na mamirapiratra ho an'ny varotra amin'ny vanim-potoana fialantsasatra izany.
Na eo aza ny vinavina manjombona, nisy fanatsarana marobe amin'ny traikefa fiantsenana antsinjarany. Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia nankafy ny fampitaovana nateraky ny areti-mandringana toy ny fanangonana amin'ny sisiny, fandoavam-bola tsy misy fifandraisana ary fandefasana amin'ny andro iray ihany. Ireo lafin-javatra ireo dia mandeha tsara satria mamaly tsara azy ireo ny mpanjifa. Rehefa mpivarotra iray vonona hampihatra ny fanovana ary hiara-hiasa amin'ny mpanjifa mba hahatonga ny traikefa amin'ny mpivarotra tsy azo antoka ho tsara kokoa sy azo tantanana, dia mandresy ny rehetra. Amin'ity tontolon'ny varotra ity, io karazana fanitsiana io dia manondro fa ny fiaraha-miory amin'ny mpanjifa, tsy voatery ho ny vidiny ambany indrindra, izay mety hampiditra fivarotana antsinjarany amin'ny farany.
Tsy zava-baovao ny fiaraha-miory mpanjifa. Raha ny marina dia 80 isanjaton'ny mpanjifa no miorina amin'ny fihetsem-po ny fanapaha-kevitr'izy ireo hividy.
Deloitte, manondrana ny sandan'ny fifandraisan'ny fihetseham-po
Ny fahatsapan'izy ireo momba ny vokatra na serivisy, ny fomba fanolorana azy ireo amin'izy ireo, ary ny fihetseham-pony amin'ny mpivarotra manolotra azy. Ny fanaovana fifandraisana amin'ny mpanjifa dia mpiorina lehibe amin'ny varotra foana, fa mandritra ny fotoan-tsarotra toa izao, ny fiaraha-miory sy ny fanaovana fifandraisana ara-pihetseham-po tsara amin'ny mpanjifa dia mety hanome ny fivarotana anao ny lafiny fifaninanana ilainy.
Efa hitantsika next-gen ny fiaraha-miory dia miditra amin'ny fifangaroana amin'ny fisian'ny chatbots an-tserasera, ny lisitry ny tolo-kevitra ary ny mpanampy amin'ny fivarotana virtoaly. Ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny fiasan'ny serivisy serivisy ho an'ny mpanjifa miverimberina dia nanatsara ny traikefa an-tserasera azo antoka, saingy ny haben'ny fahombiazany dia voafetra amin'ny olana iraisana sy mora adiresy. Ny fahaizan'izy ireo manery sy manidy ny varotra dia somary an-jorony ihany. Toa tsara ny chatbots amin'ny famakiana script saingy mbola tsy manana ny tena izy persona izay hahatonga azy ireo hifandray bebe kokoa - amin'ny ambaratonga mampihetsi-po, farafaharatsiny.
Izany dia nilaza fa faritra iray izay toa mandeha tsara ny fiaraha-miory varotra mivantana, traikefa fiantsenana izay ahitan'ny fahalalan'ny vokatra sy ny fisakaizan'ny mpivarotra nentim-paharazana ny fahafaham-pividianana fiantsenana an-tserasera. Ny orinasa naoriko, GetBEE, manome hery ny marika hanomezana mpitsidika tranokala ecommerce amin'ny serivisy concierge mivantana, sosialy, fiantsenana - miaraka amina manam-pahaizana manokana. Ary, noho io fifandraisan'olombelona io, hitanay ireo marika fa miaina salan'isa fanovana varotra 25% eo ho eo. Tena mahomby tokoa izany raha ampitahaina amin'ny isa mahazatra sy 1% 2 izay hita amin'ny ankamaroan'ny tranonkala e-varotra.
Na dia manome tombony ho an'ny automatique aza ny kiosko fiantsenana iray sy ny fizahana fizahana tena manokana, dia mbola tsy tratry ny mpanjifa ihany ny torohevitra sy torohevitra miaraka amina mpiara-miasa amin'ny varotra mahay. Io fikitikitry ny olombelona io dia tsy hita tamin'ny traikefa fiantsenana an-tserasera, saingy noho ny 5G sy ny fantsom-pifandraisana nivelatra, azo atao izao ny manao fakan-kevitra amin'ny horonantsary mivantana amin'ny fitaovan'ny finday ho an'ny mpanjifa ary mivezivezy amin'ny endrik'ireo vokatra.
Ireo mpiara-miasa amin'ny varotra an-tserasera ireo dia manangana fifandraisana ara-pihetseham-po amin'ireo mpiantsena an-tserasera. Izy ireo dia mamadika ny varotra ho lasa varotra ary mampiasa tetika matanjaka aza. Mihoatra noho ny vokatra na ny vidiny, ny fifampiraharahana tokana izay hitan'ny mpanjifa maro no fampitomboana lanja amin'ny traikefa fiantsenany. Mampametra-panontaniana izany, raha mahay manolotra an'ity karazana dia varotra mampihetsi-po ity ny mpifaninana aminao, mety hisintona mpanjifanao maromaro ve izy ireo amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra?
Fanandramana miantsena fanampiana GetBEE
'Io ny vanim-potoana hampiasana ny traikefa fiantsenana ho an'ny mpanjifanao. Ny fampiononana sy ny fihetsem-po dia ampahany lehibe amin'ny fahombiazan'ny varotra, manaloka ireo andalana teo aloha toy ny vidiny sy ny tsy fivadihana amin'ny marika. Mampihomehy, ireo mpiara-miasa antsinjarany dia natahotra foana sao hisolo azy ireo ny teknolojia. Ny tena izy dia, ny teknolojia dia nanampy tamin'ny famolavolana toetra vaovao sy mendrika ho an'ny mpiara-miasa amin'ny varotra, ary hahaliana ny mahita ny fiovan'ny anjara asa rehefa mitombo ny lazan'ny varotra mivantana amin'ity vaovao ity. toekarena mifandraika.
Mamandriha Demo GetBee
Tags: 5gecommercefihetseham-pofividianana ara-pientanam-pofividianana ara-pientanam-pogetbeetsindry iray-tsindry iraympiara-miasa amin'ny varotra an-tseraseraonline shoppingmpanampy amin'ny fiantsenana an-tseraserafizahana tenafiantsenana
Thea C. Myrhvold dia mpanorina sy Tale Jeneralin'ny GETBee ekena manerantany, sehatra fizarana fahalalana B2B natao hanatsarana ny traikefa fiantsenana ho an'ny mpanjifa sy hanovana ny ho avin'ny asa. Miaraka amin'ny rakitsoratry ny zava-bita tamin'ny teknolojia sy ny fanavaozana nandritra ny 10 taona mahery, dia fantatra amin'ny fahaiza-mitarika sy ny fahaiza-manao fifandraisana matanjaka miaraka amin'ny fahaizana voajanahary hanangana sy handanjalanja ny fanombohana teknolojia.
Excel Formula ho an'ny fanadiovana angon-drakitra mahazatra
Mampatahotra… Mikasa ny handany $ 100 mahery amin'ity taona ity ny mpankafy Halloween antonony!